Mon, Sep 20, 2021 | 05:22:55 NST
म्यानमारको राष्ट्रपतिमा आङसाङ सुकी निकट नेता निर्वाचित
चैत १४ – म्यानमारको राष्ट्रपतिमा आङसाङ सुकी निकट नेता उ विन मिन्त निर्वाचित हुनुभएको छ ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन किन रेलबाट मात्रै यात्रा गर्दछन् ?
चैत १४ – थुप्रै आशंका र अनुमानपछि अन्ततः उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन चीन आएको आधिकारिक पुष्टि भयो ।
अमेरिका गएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा कपडा खोल्न लगाइयो
चैत १४ – अमेरिका भ्रमणमा गएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खक्कान अब्बबासीको जोन एफ केनेडी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्वसाधारणलाई जस्तै गरी कपडा फुकाल्न लगाइएको छ ।
किम जोङ चीन भ्रमणमा गएको पुष्टि
चैत १४ – चीनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको चीन भ्रमणको पुष्टि गरेको छ । चिनियाँ समाचार संस्था सिन्हवाले किम जोङ उन चीन भ्रमणमा रहेको पुष्टि गरेको हो ।
तमिलनाडुमा ८६ जोडीको सामूहिक विवाह (भिडियो)
चैत १४ – भारतको तमिलनाडुमा सोमबार ८६ जोडीको सामूहिक विवाह भएको छ ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको चीन भ्रमण हल्ला मात्रै
चैत १३ – उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन चीन पुगेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको चीनले बताएको छ ।
​सत्ता सम्हालेदेखि देश बाहिर नगएका किम जोङ चीनतर्फ
चैत १३ – सत्ता सम्हालेदेखि आफ्नो देश बाहिर नगएका किम जोङ उन चीन गएका छन् । जापानी मिडियाका अनुसार उत्तर कोरियाका नेता किम जोङलाई लिएर एउटा रेल चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको छ ।
भ्रामक समाचार लेख्नेलाई दश वर्ष जेल सजाय
चैत १३ – मलेसियाको सरकारले भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा दश बर्ष जेल सजाय दिने कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
शीत युद्धपछि रुसमाथि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कारवाही
चैत १२ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतका पूर्व रुसी जासूसमाथिको रासायनिक आक्रमण प्रकरणमा ६० जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने आदेश दिएका छन् ।
चीनले फेरि डोकलाम आफ्नो हिस्सा भएको बतायो, भारत भन्छ : हाम्रो सेना तयार छ
चैत १२ – भारत र चीनबीच रहेको डोकलाम सीमा विवाद फेरि चर्चामा रहेको छ ।
चिसियो अमेरिका र रुसको सम्बन्ध : ६० रुसी कुटनीतिज्ञलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्ने
चैत १२ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६० जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्न आदेश दिनुभएको छ ।
​नक्कली समाचार दिए १० वर्ष जेल सजाय
चैत १२ – मलेसियाको सरकारले नक्कली समाचार दिनेलाई १० वर्षको जेल सजाय तोक्ने भएको छ ।
​रुसको मलमा आगलागीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या ६४ पुग्यो
चैत १२ – रुसको साइबेरियामा रहेको व्यापारिक केन्द्रमा आगो लाग्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६४ पुगेको छ ।
रुसको व्यापारिक केन्द्रमा आगो लाग्दा ३७ जनाको मृत्यु
चैत १२ – रुसको व्यापारिक केन्द्रमा आगो लाग्दा ३७ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । ४१ बालबालिकासहित ६४ जना हराइरहेका छन् । व्यापारिक केन्द्र रहेको भवनको एक भाग नै भत्किएको छ ।
​उड्नै लागेको जहाजका को–पाइलट रक्सीले मातेपछि...
चैत ११ – उड्नुभन्दा केही समय अगाडि एक पोर्चुगाली विमानका को–पाइलटले रक्सी पिएर यात्रुलाई अलपत्र पारे ।
पृथकतावादी क्याटालान नेता जर्मनीमा पक्राउ
चैत १० – स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र क्याटालोनियाका पृथकतावादी नेता कार्लस पुग्देमोन्टलाई जर्मनीबाट पक्राउ गरिएको छ । डेनमार्कबाट बेल्जियम हिँडेका पुग्देमोन्टलाई जर्मन प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । राज्यद्रोहको आरोप खेपिरहेका पुग्देमोन्टमाथि स्पेन सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पुग्देमोन्टको सरकारले गएको वर्षको अक्टोबरमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत क्याटालोनियालाई स्पेनबाट स्वतन्त्र गराउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरिदिएको थियो । केन्द्र सरकारले राज्यद्रोही घो...
उत्तर कोरिया संसारकै लागि खतरा – ओबामा
चैत १० - उत्तर कोरिया संसारकै लागि एउटा ठूलो त्रास भएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बताउनुभएको छ ।
बन्दुक नियन्त्रणको माग गर्दै अमेरिकामा लाखाैंकाे प्रदर्शन
चैत ११ – अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भैरहेको छ । हाम्रो जिन्दगीका लागि प्रदर्शन भन्ने नारासहित उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
लालु यादवलाई १४ वर्ष जेल सजाय
चैत १० – भारतीय जनता दल आरजेडीका सर्वोच्च नेता लालुप्रसाद यादवलाई चौथो चारा घोटाला काण्डमाथिको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १४ वर्ष जेल सजाय र ६० लाख भारतीय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालतले सुनाएको छ ।
​मोटोपनले क्यान्सर हुनसक्छ
काठमाडौं, चैत १०– मोटोपनका कारण हुने क्यान्सर बढेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेकोे छ । बेलायतमा भएको अनुसन्धानले धूमपान भन्दापनि मोटोपनको कारण क्यान्सरका विरामी बढेका देखाएको हो ।
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पाइलटकी श्रीमतीको पनि निधन
काठमाडौं, चैत ९ – फागुन २८ गते काठमाडौंमा दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान चालककी पत्नीको शुक्रबार विहान निधन भएको छ ।
एक खतरनाक सुटर : जोसँग हिटलरको सेना पनि डराउँथे
चैत ८ – यो कथा ती युवतीको हो जसले इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक शूटरको दर्जा पाएकी थिइन् ।
​चीन विरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
चैत ८ – ट्रम्प प्रशासनले चीन विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने योजना बनाएको छ ।
​‘सद्दाम हुसेनले आफ्नै २६ लिटर रगतबाट कुरान लेखाएका थिए’
चैत ७ – सद्दाम हुसेनको जीवनी लेख्ने कोन कफलिन लेख्छन्, ‘सद्दामले बनाएको एउटा मस्जिदमा रगतले लेखिएको एउटा कुरान राखिएको छ ।’
बोको हरामले अपहरण गरेका एक सय १० छात्रालाई छोडिदियो
चैत ७ – एक महिनाअघि नाइजेरियाको विद्रोही समूह बोको हरामले अपहरण गरेका एक सय १० छात्रालाई छोडेको छ ।
काबुलमा अात्मघाती बम विस्फोट : कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु
चैत ७ – अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बम विष्फोट हुँदा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको छ ।
​गर्जिए सी जिनपिङ : दुश्मनसँग जस्तोसुकै युद्ध लड्न तयार छौँ
चैत ६ – चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले मंगलबार १३ औँ नेसनल पिपल्स कंग्रेसलाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्वोधनमा सी जिनपिङ निकै नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
किमले दिए पुटिनलाई बधाई
चैत ७ - उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनले रूसमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा नेता भ्लादिमिर पुटिन पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा मङ्गलबार बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ ।
के भएको थियो मोसुलमा ३९ भारतीय नागरिकको साथ
चैत ७ – सन् २०१४ मा इराकमा ४० भारतीय नागरिक हराएका थिए । जसमध्ये ३९ जनाको हत्या भएको मंगलबार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जानकारी दिएकी थिइन् ।
गद्दाफीसँग सहयोग लिएको आरोपमा फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी पक्राउ
चैत ६ – फ्रान्सका भूतपूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई चुनावी खर्चको अनुसन्धानको लागि भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
इराकमा अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या
चैत ६ – सन् २०१४ मा इराकमा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका ३९ जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको समाचार छ ।
नर्दन ह्वाइट प्रजातिको अन्तिम भाले गैंडा मर्‍यो
चैत ६ –संसारमा एक्लै बाँचिरहेको उत्तरी सेतो (नर्दन ह्वाइट) प्रजातिको भाले गैंडा मरेको छ ।
राष्ट्रपति पुटिन जो कसैसँग डराउँदैनन्
चैत ६ – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जुडोका ब्ल्याक बेल्ट हुन् । मार्शल आर्टको यो खेलका दुई खुबी उनको जीवनमा पनि देखिन्छ, छल र आक्रामकता ।
पुटिन चौथोपटक रुसको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
चैत ५ – भ्लादिमिर पुटिन चौथोपटक रुसको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । पुटिन ७६ प्रतिशत भन्दा बढी मतसहित विजयी भएको रुसी निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रुस : राष्ट्रपति चुनावमा २० लाख मतदाताले बाहिरी देशबाटै मतदान गर्ने
चैत ४ – रुसमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार मतदान सुरु भएको छ ।
​१ सय ८० देशमा के गर्दैछ अमेरिकी सेना ?
चैत ४ – गएको अक्टोबरमा नाइजरमा एउटा आक्रमणमा चार जना अमेरिकी सैनिक मारिए । अफ्रिकी देश माली र नाइजरको सीमामा एक अपरेशनमा रहेका बेला अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण भएको थियो ।
रुसमा राष्ट्रपति चुनावको लागि मतदान सुरु
चैत २ – रुसमा राष्ट्रपति चुनावको लागि मतदान सुरु भएको छ ।
​रुस र बेलायतको सम्बन्ध अझै चिसियो, अब रुसले २३ जना बेलायती कुटनीतिज्ञ निकाल्ने
चैत ३ – बेलायतले २३ जना रुसी कुटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्ने घोषणा गरेसँगै रुसले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।
फिलिपिन्समा विमान दुर्घटना, १० को मृत्यु
चैत ३ - फिलिपिन्समा एउटा सानो विमान दुर्घटनामा परि १० जनाको ज्यान गएको छ ।
सी जिनपिङ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा अनुमोदित
चैत ३ – चिनियाँ संसदले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मतिले राष्ट्रपतिमा अनुमोदन गरेको छ । ​